Xukuumadda oo dabacsanaan u muujisay Madaxweynaha Galmudug (Warbixin) | Dhacdo.com
Home Dhacdooyinka Xukuumadda oo dabacsanaan u muujisay Madaxweynaha Galmudug (Warbixin)
Xukuumadda oo dabacsanaan u muujisay Madaxweynaha Galmudug (Warbixin)
Tan iyo markii uu toddobadkan khilaaf cusub soo kala dhexgalay Xukuumadda Somaliya iyo Maamulka Galmudug ayaa waxay xukuumaddu bilowday dadaalo ay dabacsanaan ugu muujinayso Madaxda Galmudug.
Khilaafkan ayaa yimid markii uu Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), uu dib ugala noqday wakiilashadii uu Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya ugu wakiishay dhameystirka xilliga kala guurka ee Galmudug iyo dhismaha maamulka cusub.
Madaxweynaha Galmudug ayaa horey u aqbalay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay ka shaqayso dib u heshiisiinta beelaha Galmudug iyo dhismaha Galmudug-ta cusub, ee loo dhisayo bulshada deegaanka, balse tallaabada uu dib ugala noqday ayaa loo maleynaya mid salka ku haysa awood qaybsiga Galmudug-ta cusub.
Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta khudbad xasaasi ahayd ka jeediyay Shirka Iskaashiga Somaliya, oo gelinkii dambe ee maanta lagu soo geba-gabeeyay Magaalada Muqdisho. Madaxweynuhu wuxuu aad u dhaliilay dowladda, isagoo dhanka kalena sheegay in shirka ay ka maqan yihiin saaxiibo, ay aad isugu dhow yihiin, oo dabcan uu ugala jeedo Madaxweye-yaasha Jubbaland & Puntland.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Somaliya, Xasan Cali Khayre oo hadalqaatay ayaa soo dhaweeyay khudbadda Madaxweynaha Galmudug, isagoona dabacsanaan u muujiyay Hoggaamiyaha Galmudug.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa ku dhawaaqay in hawlaha dhameystirka Maamulka Galmudug looga dambeen doono amaba uu horkici doono Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle.
Dadka badankii oo walaac ka muujiyay khilaafka toddobadkan soo kala dhexgalay Villa Somalia iyo Maamulka Galmudug ayaa waxay qaarkood sheegeen in tani ay caqabad ku noqon doonto dhismaha Galmudug-ta cusub.
Hadalka Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa waxaa loo fasiran karaa mid ay xukuumadda kaga fogaanayso is qabqabsi dambe, xilli ay la foolanayso khilaafka kala dhaxeeya Maamulada Puntland & Jubbaland. Waxay kaloo xukuumadda u muuqataa mid iska yareynaysa eedeymaha xargaha goystay ee kaga imaanaya Siyaasiyiinta mucaaradka.
Mucaaradka ayaa waxay dowladda ku eedeeyaan mid jiho khaldan dalka ku hoggaaminaysa, ayna dalka dib ugu celinayso marxaladdii adkaa ee la mahdin ee Somaliya ka soo gudubtay.
Si kastaba ha-ahaatee haddii Xukuumadda Khayre ay ka dhabeyso hadalkii maanta ka soo yeeray Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa waxay dardargelin doontaa dhismaha maamulka cusub ee lagu wado in lagu yegleelo Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.